Galaxy S7 သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အသုံးအများဆုံး Samsung မိုဘိုင်းလ်ဖြစ်သည် Androidsis
Galaxy S7 သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အသုံးအများဆုံး Samsung မိုဘိုင်းလ်ဖြစ်လာသည်
က galaxy S7
ScientiaMobile ၏လေ့လာမှုအရပြီးခဲ့သည့်နှစ် Samsung ၏စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်စမတ်ဖုန်းသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်worldwideပြီလတွင်ကမ္ဘာအနှံ့တွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုလာခဲ့သည်။ Samsung ၏ Galaxy S2017 သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအခြား Samsung စက်များထက်မိုဘိုင်းရှာဖွေမှုအချက်အလက်များပိုမိုထုတ်လုပ်နိုင်ကြောင်းအစီရင်ခံစာတွင်ဖော်ပြထားသည်။
လွန်ခဲ့သောတစ်လခန့်ကပင် Kantar World Panel မှ Samsung သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အများဆုံးအသုံးပြုသည့်မိုဘိုင်းဖုန်းမှာ Galaxy S5 ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ Samsung S7, Samsung ဖုန်းအားလုံးတွင်အမြင့်ဆုံးသုံးစွဲသူအများဆုံးဖြစ်သည်.
ဒီလေ့လာမှုကလည်းမှတ်ချက်ပြုသည် Galaxy S5 သည်ရက်ပေါင်း ၅၇၉ ရက်အမြင့်ဆုံးလူကြိုက်များမှုကိုရရှိခဲ့သည် နိုဝင်ဘာလတွင်ဈေးကွက်ဝေစု ၅.၅ ရာခိုင်နှုန်းရရှိရန်နှင့် Galaxy S5.5 သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်ဇွန်လတွင်အမြင့်ဆုံးအသုံးပြုသူ ၃.၁% ဖြင့် ၃.၁% အထိရောက်ရှိခဲ့ပြီး ၄၂၈ ရက်အကြာတွင်စတင်ခဲ့သည်။
Galaxy S7 သည် Galaxy S5 နှင့် S6 ထက်သာလွန်သည်
Samsung S7 သည်စတင်မိတ်ဆက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း ၄၀၀ အတွင်းလူကြိုက်များမှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်ခဲ့သည်။ Galaxy S400 နှင့် S5 အထက်တွင် Samsung အသုံးပြုသူများ၏အသုံးအများဆုံး terminal ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် Samsung သည် Galaxy S6 နှင့် S55 Edge ထုတ်ကုန် ၅၅ သန်းကို ၂၀၁၇ ပထမသုံးလပတ်အကုန်အထိရောင်းချနိုင်ခဲ့သည်။
အစီရင်ခံစာတွင်သတင်းအချက်အလက်မပါပါ က galaxy S8ဒါကြောင့်အနိုင်နိုင်ဝယ်ယူဘို့ရရှိနိုင်လုပ်ခံခဲ့ရသည်အဖြစ်။ သို့သော် Samsung ၏နောက်ဆုံးပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်သည်သုံးစွဲသူ ဦး ရေကိုအဆတိုးများပြားစေသောအလားအလာရှိသည်။ အထူးသဖြင့် Galaxy S5 နှင့် S6 အသုံးပြုသူများသည် မော်ဒယ်အသစ်သို့အဆင့်မြှင့်တင်.
Samsung ကယခင် Galaxy S8 နှင့် S8 Plus များအတွက်ကြိုတင်စာရင်းသွင်းမှုများသည်ကုမ္ပဏီ၏အခြားအဓိကအချက်များအတွက်စာအုပ်များထက်ကျော်လွန်ခြင်း၊ ကိုရီးယားတွင်စံချိန်ချိုးခြင်းနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအဆင့်မြင့်အဆင့်သို့ရောက်ရှိခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Samsung » Galaxy S7 သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အသုံးအများဆုံး Samsung မိုဘိုင်းလ်ဖြစ်လာသည်